RAKKINA DUUBNI BAL’INA! -
Qixxeessaa Lammii | Muddee 13, 2017
Addunyaa tana irra Rabiin malee wanti waaraan hin jiru. Bal’na irra dhiphinatu addunyaa biyya lafaa tana irratti baay’ata. Jiruu fi jireenyi dhala namaa sadarkaa dhuunfaa irraa qabee rakkoodhaan kan saamsamaadha. Rakkoo uumaa fi uumamaan haqaaramte keessummeessuu danda’uun ammoo obsa cimaa gaafata. QBO ABOn hoogganamtus akkasuma rakkoo hamtuu keessatti jalqabamtee rakkoo ulfaattuu keessa qaxxaamurtee rakkoo ulfaattuu keessaa bahuuf ammallee wixxifachaa jirti. Qabsoo jechuun gabaabatti rakkoo badduu jechuudha.
Namni hiikkaa qabsoo hin beekne akka laayyotti ilaala? Gabayaa bahanii galuu itti fakkaata. Dirree sirbaa fi dhiichisaa seeha. Hojii haasawaan hojjatamu, rakkoo haasawaan furamu jedhee ilaala. ABOn waggaa 40 qabsorra ture bilisummaa fiduu hin dandeenye namootni jedhanii dhaaba kana tuffatan hedduudha. Ijaan waa madaaluun hin ulfaatu. Ijji bakka miilaan gahuu hin dandeenye mara nama geessiti waan ta’eef. Waan qabsoon taate kan keessa seenee argetu irraa himuu danda’a. Innuu hamma keessa jiru qofa malee eega keessaa bahee booda homaa irraa himuu hin danda’u. Ala dhaabbatanii waan mana keessa ni jiraa fi hin jiruu isaa hin beekne irraa odeessuun hin danda’amu waan ta’eef.
Qabsoon hojii ulfaataadha. Lubbuu dhabutti dabalee hiraar hedduu of keessaa qabdi. Dalagaa itti wal ajiifatan miti. Fe’aa abbaan of irra kaahee of irraa buusu malee fe’aa nama biraan namatti fe’amee nama biraan nama irraa lafa kaa’amuu miti. QBO akka hojii salphaatti namootni haasawan ni jiran. Qananii keessatti dhalatanii qananii keessatti guddatanii dhimma qabsoo irratti haasawuun ni salphata. Oromootni har’a hooggana dhaaba kanaa tuffatan hedduun isaanii warra ulfina qabsoon qabdu hin beekne. Warri isaan caqasee harka tumuuf ammoo warra isaan sanaahuu hin geenneedha.
Qabsoon gabrummaa bara dheeraa of irraa kaasuuf taasifamu hojii humnaa miti. Hojii boqonnaa gosa kamuu namaaf hin hayyamne. Qabsaawaan sabaaf qabsaawu ajjeessee wareegamee dhala hegeree ulfina dhaalchisuuf qabsaawa. Qabsaawaan saba isaaf lubbuu kenne firii qabsichi fidu irraa waan eeggatu hin qabu. Lubbuu isaan kabajaa saba isaa argamsiisuuf qabsaawa. Qabsaawaan gumaa qabsoon argamutti abbaa ta’u isa akka carraa ta’ee lubbuun hafee bilisummaa fi walabummaa jiruun yoo dhaqabe qofa.
Namootni ulfina kana hin beekne qabsaawota sabaa haala gara garaan qabsoo irraa ala bahan ija tuffiin hennaa ilaalan mul’atu. Wareega lubbuu isaan saba isaaniitii baasaniif kabajaa hin qaban. Qabsaawota waregamanii fi warra lubbuun jiraniifis kabajaa hin qaban. Hiree baratanii jiruu ulfinaa jiraachuu dhabuuf waan isaan dirqisiise qabsoo sabaa ta’uu hin beekan. Rakkoon qabsoo qabsoon irra aanamti. Rakkina duubaan bal’inatu jira. Kanaaf kan kana hin beekne akka fedhe dhimma qabsoo irraa dubbachuu tasa hin danda’u.
Hooggannii fi miseensi ABO fi sab-boontotni Oromoo dhimma qabsoo isaanii irraa dubbachuuf mirgaa fi dirqama qabu. fakkaattotni fakkeessitootni garuu dhimma qabsoo irraa miira ittiin dubbatan qabaachuu hin danda’an. Miira kana horachuuf gingilchaa qabsaawaan tokko keessa dabru keessa dabruu qabu. Kitaabota gara garaa dubbisanii waan baratanii fi dhagahan qofa odeessuun ummata gurra duuchuun qabsaawaa nama hin gootu. Waan baratanii fi dhagahan lafa irratti ittiin hojjatanii mul’isanii mul’achuu barbaachisa. Lolanii lochiisuun gilgilchaa qabsaawaan tokko keessa muruu qabu waan ta’eef gara dirree falamaatti dhihaachuu isaan barbaachisa. Namootni hadhaa dirreen qabsoo qabdu dhandhamee hin beekne warra hadhaa sana dhadhamanii jiranii olitti warraaqaa ta’anii fuula miidiyaa gara garaa irratti bahanii henna lallaban nama ceersa.
Maqaa qabsaawaa wareega lubbuu saba isaaf kafaleen kursii laafaa irra taa’anii daandilee bu’aa bisaan qabbanaawaa hambuuqqachaa, buddane furdaa qurxachaa dhimma qabsoo irraa odeessuun hin danda’amu. Kun bakka loon hin oollee kobootaa guuruu ta’a.
Qabsaawoti qormaata gara garaa keessa dabranii lubbuun jiran ammoo kabajaa kashalabdootaan irraa mulqameef jecha abdii murachuu hin qaban. Wareegamni saba isaaniif baasan bilaashatti kan hafu miti. Dhaadannoo rakkoo qabsoon qabdu qabsoon irra aanna jedhu sana hiikkachuu hin qaban. Qabsoo goota hedduu of biraa itti dhaban sana galmaan gahuuf yoomiyyuu caalatti carraaquu qabu. Olola qabsaawotni afaanii dhaaba isaanii irratti oofan keessatti hirmaachuu irraa fagaachuu barbaachisa. QBO ABOn hoogganamtu har’a sadarkaa boonsaa irra geettee jirti. Ummatni keenya biyyaa walii galatti har’a miseensummaa ABO maxxanfatuu qofa osoo hin taane hooggana itti ta’ee kaayyoo fi akeka dhaaba keenyaa galmaan gahuuf adda durummaan geggeessaa jira. Yoo Rabbi fedhe Oromiyaa dhuunfatuu qofatu isa hafe.
Farreenii fi diinotni har’aa fi kalees garuu sadarkaa guddina qabsoon kun irra gahee jiru kana waan arganiif hirriba dhabanii jiru. Ijibbaata dhumaa qabsoo kana ukkaamsanii harkatti galfachuuf alaa fi keessaan wal keessa ceehaa jiru. Waraabessa taree sareen dutte akkuma jedhame waan harka isaanii hin jirre dhuunfachuu hin danda’an. Kanaaf, bal’inni rakkoo duubaan jiru mul’atee jira. ABOn, miseensotni isaa, ummatni Oromoo walii galaa fi firoottan qabsoo keenyaa cufti firii qabsoo kanaan argamuuf jiraatu dhandhamachuuf yoomiyyuu caalatti yeroon qabsoo kanatti xumura gochuuf gamtaan itti warraaqnu amma!
Ummata Oromoof Injifatnoo Dachaa Haa Ta’u!
Tigreef Kufaatii fi Salphina Dachaa Haa ta’u!